The nidaamka bangiyada Swedish | Apg29
Part seddex ka mid ah buugga shirqool The listicmaalka by Cash oo keliya.
Riksbanken ayaa ka shaqaynaysa waqtiga oo dhan, inkastoo uu eedeeyey "dhexdhexaadnimada" ee isticmaalka dhimay oo lacag caddaan ah. Riksbanken sannad walba soo saartaa warbixin ah oo lagu magacaabo "The Swedish Market Financial". Waxaa ka mid ah tirakoobka lacagaha. Waxaa waxaad ka akhrisan kartaa faahfaahin tirakoobka sida inta ATM iyo boosteejada credit card waxaa jira in Sweden.
The bangiyada gaarka loo leeyahay waxaa laga heleyaa afarta weyn. Nordea, Swedbank, SEB iyo Handelsbanken. Banks haysan lacag digital gaar ah oo loo isticmaalo oo kaliya gudahood bangiga laftiisa. Bangiyada ayaa sidoo kale ilaa xad ka kasta oo kale oo haysta kasta securities kale oo ka koobnaan karaa dhibaatooyinka dhaqaale saamayn domino khatar ah. Waxa uu noqday caado u ah jilayaasha kale sida shirkadaha caymiska iyo silsilado tafaariiqda weyn helay xaaladda bangiga. Caalami, Sweden waxaa ku xiran xeerarka bangiyada yeedhay Basel III. Heerka Tani waxay u baahan xasiloonida dhaqaale ee bangiyada '. Ka baxsan nidaamka asaasiga ah waxaa jira laba "lakab" loo yaqaan I Tier iyo Tier II, kaas oo inta badan ka kooban tahay masuuliyadii. Tani waa arrin duugi, laakiin waxaa wanaagsan in la ogaado erayada kuwa dambe laga yaabaa in ay naftooda ka badan quusin in nidaamka bangiyada.
The Riksbanken iyo Golaha Guud ayaa mar walba xiriir dhow la leeyahay baarlamaanka. Riksbanken ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay Guddiga Fulinta ah. In 1600s ah, Sweden lahaa bangi gaar loo leeyahay. Riksbanken kulantay by bangiga ka dib markii kicitaan la iibsaday by gobolka. Riksbanken qaaday qaab lagu jiro ee sharcigan oo ku xadgudba hor boqortooyada Karl XIs. In waqtigeena, bangiyada ka masuul ah dhiig-miirashada iyo Riksbanken la simaha masuulka ka mid ah dadka oo dhan Swedish by hortagga sida ugu badan ee suurtogalka ah isticmaalka lacagta caddaanka ah.
Riksbanken ayaa markaas ahaa monoboli ku saabsan bixinta raso. In the 90s hore bilaabay inuu siyaasadda dhaqaalaha in ay diiradda saaraan sicir halkii qiimaha sarrifka. Riksbanken Lacagta maamushaa rinns kaliya Riksbanken ah. qalab ugu weyn ee The Riksbanken ayaa si loo xakameeyo dulsaarka waa in la beddelo heerka repo si bangiyada kale rajeynayaa raaci doona. Xaaladda dhaqaale noqon kara sidaas darteed la yaab leh in heerka repo waa negative. Marka ay tani dhacdo iyo bangiyada ka dib markii laga yaabaa in deriska Denmark kici baahida kordhaysa lacag caddaan ah.
Riksbanken ayaa ka shaqaynaysa waqtiga oo dhan, inkastoo uu eedeeyey "dhexdhexaadnimada" ee isticmaalka dhimay oo lacag caddaan ah. Riksbanken sannad walba soo saartaa warbixin ah oo lagu magacaabo "The Swedish Market Financial". Waxaa ka mid ah tirakoobka lacagaha. Waxaa waxaad ka akhrisan kartaa faahfaahin tirakoobka sida inta ATM iyo boosteejada credit card waxaa jira in Sweden. Bank ayaa sidoo kale daabacay warbixin kale oo ku saabsan lacagta loo yaqaan "The Swedish suuqa lacagaha tafaariiqda."
Qayb weyn oo ka mid ah nidaamka bangiyada Swedish ka kooban yahay RIX. The Riksbanken ayaa RIX sys-buls- dhigi doonaa lacagta badan oo la samayn karaa inta u dhaxaysa dhammaan bangiyada waaweyn. Noocyada ugu badan ee lacagaha maraan RIX haddii ay tahay lacag caddaan ah, kaarka, credit, securities ama lacagaha. A yar duugi sida caadiga ah la sheegay in RIX "degtaa lacagaha by daymaha iyo receivables guuleeysteen nidaaminaya". laga yaabaa in ay yara diidani in heshiis RIX la-qoraal ah oo lacag caddaan ah digital. nooca muhiim ah oo lacagaha, hawlgabka waxaa shubo koontada Deynta ee Riksbanken ku dhex RIX.
muggeed oo ka mid ah bangiyada Swedish iyo qaar ka mid ah ajnabiga ah ay leeyihiin xisaabaadka ee RIX - nidaamka. Waxaa ka mid ah arrimaha dibadda dareemi Citybank iyo Morgan Chase. Qaar ka mid ah bangiyada Jak Bank iyo Ecobank aan ku xidhnayn RIX. Banks in aanad lahayn xisaab RIX weli isticmaali kartaa habka ay wakiil.
Eebaha Princess Buoni ah, Dragon Credit Card iyo Knights Black
mar Waxaa amiirad ku ahayd Sidee loo magacaabay Buoni. Waxay ku saabsan waxa eegay inuu noqdo khasnad weyn oo lacag caddaan ah oo ah qaab lacagta birta ah iyo taallo raso fadhiistay. Laakiin kulan oo waxaa wax khiyaaneeya. Of raso weyn, waxa ay aheyd kaliya dusha sare ee foomka of boqolkiiba dhawr ka koobnayd lacag caddaan ah. Inta lagu guda jiro dusha dhaldhalaalaan oo geni oo malaayiin kaararka deynta. In dhexe ee ka tuullan, waxay ahayd uun waxba kama jiraan weyn abuuray by sixir sharka. waxba kama jiraan ee loo yaqaan lacagta digital helay raso canshuurta eegto inta ka badan waxaa dhab ahaa. Qiyaastii darafka ka tuullan, awelna loola goblins yar xun loo yaqaan kuwa baangiga jooga. Sida ugu dhakhsaha badan uu qof isku dayay in uu dhufsan qadaadiic ah si ay u foodhyaan oo tusiyey ilkaha fiiqan af badan. Waxa ay ahayd oo keliya geesisan aduunka kuwaas oo ku dhiiratay in ay dhufsan lacagta.
masduulaagii xumaan oo uu listicmaalka credit card geesigeeda madow doonayay inuu qaado lacag caddaan ah oo dhan iyo dilo amiirad. hooskeeda noocan oo kale ah oo tuulmo canshuurta been jirey dalal badan. Beri baa ah, tuulo canshuurta ida ka koobnayd lacag caddaan ah. Laakiin ka dib markii saaxiriinta shar dalka weyn fog SamUSAmien abuuray dawacooyin gaaban, kaararka deynta iyo farqiga iyadoo la kaashanayo sixirka madow noqday waxa u noqday. Saaxiriinta agagaarka dalalka oo dhan ka dhex ambaday, oo burburiyey ku dagtay canshuurta by iyaga oo buuxinaya la kaararka deynta oo uu madhan yahay. Saddex ka mid ah saaxiriinta ugu darnaa waxay ahaayeen walaalo Mastro, Expresso iyo Dinero.
Ina keena aynu soo bandhigno qaar ka mid ah Knights xun sida ay ku wareegsan kaararka miiska-qaabeeya iyo qorshayaasha si loo dilo amiirad Buoni iyo ka tuullan saar lacagta wadajir fadhiisan. Mid ka mid ah Knights ku magacaaban Riksbanken. Fudayd waa in la hubiyo in lacagta dhawraa on dhow tiro isku mid inkasta oo xidhmooyin soo dhaliyo iyo korayo.
Waxa uu si fiican u yaqaan in dalka Finansien. Annagu garan mayno haddii ay kuu sheegi wax ka badan isaga ku saabsan.
geesigeeda kale oo la odhan jiray FSA. Sida ugu dhakhsaha badan qof aad u badan sida waswaasin dhac erayga meel dalka kiish Finansien ayuu halkaas ka soo dhaco, dhowr maalmood, uu ka soo qeyliya fariin la mid ah in jidadka ilaa uu si buuxda u yahay cod xabeeb leh.
キ 0 "Waa in aan ka saari madaahibta lacag caddaan ah si tartiib tartiib ah!"
Ururka Maaliyadda geesigeeda kale.
キ 1 "Boobka!, Dhac!" Qeyliya geesigeeda this.
Waxay dhacdaa mar kasta oo qof xado hal lacag caddaan yar meel Finansien.
キ 2 "Haddii aan ka saari kaalmada lacagta caddaanka ah, waxaa waxba xadin waa!", Wuxuuna si kalsooni leh exclaims.
(Hay'adda ilaalinta Financial waa hayad hoos timaadda wasaaradda maaliyadda. Waxaa la abuuray 1991-ka ku biirto laba hay'adaha kale. Hawshoodu ugu weyn waa in ay la socdaan securities ganacsiga iyo shirkadaha maaliyadeed. FSA ayaa sidoo kale loo xilsaaray in "la xoojiyo booska uu ka macaamiisha suuqa dhaqaale." Wax walba listicmaalka si buuxda u go'aansatay madaxa naga saartay .)
labo kale oo ka mid ah Knights isku mid propsar on listicmaalka ka Daad Horumarinta iyo Ganacsiga ee Iswiidhan. hore waa aasaas cilmi ah oo dambe ururka ganacsi. Haddaba Knights waxay go'aansatay waxa dhici lahaa in this Sheeko-maasuq. si fudud Waxay wada socday oo farahooda seefahooda qalbiga Buoni ah amiirad saboolka ah inkasta oo ay ku qayliyey oo qirtay in uu naftiisa. Tan iyo markii ay ma Midkee iyo dhulsocotada boqorkii card Credit masduulaagii dalka oo dhan. masduulaagii wuxuu wada gubay oo biilasha oo dhan oo uu dab ah
neefta. Knights ayaa gaaray dhamaan lacagta birta ka tuullan iyo reebtay ee amiirad iyo kuwa badda ah.
Waxay ogaa si aad u wanaagsan in masduulaagii dhibaato la'aan baabbi'in kari lahaa amiirad ee jirka ku dhintay hal qaniinyada. Laakiin waxa haddii ay si qalad ah filaan ah liqi a qadaadiic ama laba mar uun, waxaa laga yaabaa waxay tolaa a Shilimaad yar oo dhar ah, sida amniga. masduulaagii ahaa dhab ahaantii aad xasaasiyad lacagta birta ah. Taasi waxay ahayd sababta Knights ay go'aansatay in ay heeryada amiirad ee u gudubno, meesheedii ka qaado iyada cunto u masduulaagii siinayo. masduulaagii ayaa hadda ku gabbado ee uu uu raso weyn ee kaararka deynta. Haddii qof si xun u saamaynaya isaga uu pawing fudud dhibbanaha credit card sare ballaaran oo uu sidaas ku bakhtiyeen on xaddiga iyo miisaan. End of story.
By ka hadlaya ee ku saabsan ka saarida ee lacag caddaan ah iyo iska caabin listicmaalka ee Sverge aan awoodno, haddii aan mustaqbalka fog looga hortago markaas ugu yaraan dib u Qisada noqdo xaqiiqada.
Haddii ugu xumaa dhacdo, waxaan aaminsanahay in xataa Qisada wiswis helo in la sii wado, taas oo wax walba si fiican u dhamaado.
Maxaa dhacaya haddii madaahibta lacag caddaan ah si tartiib tartiib ah u baaba'aa?
About kun sharooto laga saaray waxaa laga yaabaa in aanay wax badan oo kala duwan marka laga reebo kuwa, tusaale ahaan, soo iibsato baabuur qaali ah ka badan lacag caddaan ah. Laakiin haddii labadaba 500 iyo 200 -kronors -sedlarna saarista bilaabmaa dhibaatooyinka dhabta ah. Dharka iyo cuntada ayaa weli shaqeeya si cadaalad ah si fiican, laakiin kaliya marka la eego heshiiska waxiibsashada dhabta ah. Laakiin haddii uu qof soo iibsataa mooto ah 25000 la boqol gogo 'waa iibiye tirinta 250 raso. 200 lahayd - raso karoon dhici inaan halkaas, weli waa inuusan wax badan ku faraxsan inay tiriyaan illaa 125 Waxa uu u lumiya fiirsashada markii macaamiisha ku dhacaya hadlo isaga, halka uu ku tiriyaa. Muddo ka dib, waxaa laga yaabaa in uu diido in ay aqbalaan lacag fara badan. Cash heli karaa madaahibta kala duwan, sababtoo ah waa habka ugu wax ku ool ah.
Mas'uuliyiinta ayaa ka fursad kasta oo eedayn dhac ah si loo soo saaro lacag caddaan ah halkii xalinta dhibaatooyinka hab wax dhisid ah. dadweynaha ah wuu maqlaa ma aha in. Mid ka mid ah daraasad laga helay, tusaale ahaan, in 12 boqolkiiba Ciddii fikiri a kun oo gogo 'waa aan loo baahnayn. Dhowr sano ka hor waxa uu ahaa a dhac badan-shaaciyey in Jönköping. Waxaa dhawr maalmood oo kali ka dib, soo jeediyay FSA si kun jaamaha laga saari lahaa. In waqti ayaad ka dibna waxay sidoo kale ka saar sharooto ah shan boqol iyo kow iyo boqol tags.
Mid ka mid ah sawiri kartaa isku midka ah ee u dhexeeya caddaan ah iyo gaadiidka. Waxa ay noqon doontaa sida haddii si aad u hesho iska xatooyo gaari la mamnuuco ka baabuurta iyo baabuur. baaskiilada oo keliya iyo mootooyinka loo ogolaan lahaa in ay sii taas oo markaas u dhigma lahaa inuu ku madaahibta lacag caddaan ah oo yar. Sida habboon, aad rabto in mootooyinka iyo baaskiilada in ay aad u baaba'aan. Waa in aan laga yaabaa in hoos u dhigay farmashiyaha wax maxaa yeelay waxa ay dhacdo in ay xadaan qaar ka mid ah daawooyinka iyo isticmaalka daroogada? Si joogto ah eedayn dhac ah si ay u soo saarto lacag caddaan ah waxaa dhab xuduud u caruureed saafi ah.
Oo markii lacagtii 100-kroon oo yar baa ka hadhay, oo waxay ku jirtaa baxsad mabda 'lacag caddaan ah oo dhan. Markaas isku day at outlet ah ee bangiga (haddii aad halkaas lacag weli ka bixi karo) weydiisanaya 3,000 oo karoon in 50 - ama 20 xabbo. 150 qoraalada ku saabsan tirinta Buuggan waa Ma waxaad u malaynaysaa shaqaalaha bangiga si ay u maareeyaan naqad aad u qaro weyn oo ah lacag caddaan ah sida mashiinka ilaa tirinta ama tirada ugu xumaa dhici inay ku sii on bangiga? Waa dhib in 75 konton sheqel midkood. ATM ku salaysan bixitaanka madaahibta raso. Haddii mid ka mid ah ayaa laga yaabaa aragti ahaan la oggol yahay in ay ka qaadaan 50 iyo 20 xirmi noqon lahaa naqad qarada waaweyn oo lacag caddaan ah in mishiinnada. Qiimaha guud ee lacagta in mishiinka muxaafidka hoos u lahaa iyo mugga lacag noqon lahaa aad u balaaran oo ka yar maamuli karo gaadiidka lacag caddaan ah.
Waxay leedahay in dhinacyada qaar la soo jeediyey in ay leeyihiin lacagta qadaadiicda oo kaliya ilaa 50 qiimaha koron oo aan qoraalada. Tani xaddido lahaa ka baxsan marinka xanuunka lacag caddaan ah in la gaaray by margin ballaaran. Maxaa dhici kara in ay soo bixid ee mashiinka bangiga iyo iibiyo? Waxay jeelyihiin in lagama yaabo in ay awoodaan in ay qaataan lacagta birta ah ee mashiinka lacagta, markaas waxaa jiri doonaa. duub qadaadiic ama waxaa laga yaabaa lacagta qadaadiicda ATM qablamaya sida makiinadda Afyare jir ama waxa? Waa dhib. Dhibaatadu waxay tahay in aadan u malayn in ku saabsan ee noocan oo kale ah soo jeedin ama halkii in aad qabto lacag caddaan ah ka saarista ee isha.
Waxaa si fiican loogu tala galay in aad lacag kala bixi in heshiiska halkii la dhibaatooyin la socda. dukaamada ayaa laga yaabaa markaas dabcan sidoo kale mugga weyn u weyn jirka lacag laakiin qiimaha yar guud ahaan. gaadiidka Cash noqon doonaa aad u qaali ah qaar badan oo ka adag tahay in la maareeyo. Hadda xitaa, ka bixitaankii of lacag caddaan ah in ganacsiga khasaare dukaamada ka. Waxaa ka fog in ogaada oo dhan waa. Shakhsiyan waxaan u malaynayaa in lacagta birta ah waa ka wanaagsan iyo ka badan oo wax ku ool ah ka badan raso. Laakiin markaas waxaa jiri doona lacagta birta ah oo dhan madaahibta. Xitaa meelaha ugu sarreeya.
Waxaa si fudud u fahamsan yahay in xaaladda this, sidaas darteed, sidoo kale waxaa soo baxay ATM. Waxaa intaa dheer, sidoo kale xaqiiqada ah uttagsutomaterna wax aad u xun sababtoo ah waxa ay u baahan tahay kaarka amaahda si ay u isticmaalaan, iyo hawlaha gawrici ee bangiga. Ganacsiga ayaa sidoo kale waxaa laga yaabaa inay ka yar yar tahay in ay rabto in aad isticmaasho lacag caddaan ah iyo. Bangiyada qaarkood waxay ku siin kaliya 500-karoon mafrashka marayo nidaamka ammaanka ammaan ah u xiran yihiin. Waa arinku in ay aaminsan yihiin in bangiyada, kuwaas oo dib u qoraalo yar yar mar kale ku socon lahaa.
Dabcan xitaa tegi lahaa adeeganayay kaliya 20 qoraalada iyo Shilimaad by iibsashada cuntada qaar ka mid waqti iyo iibsadaan dhar raqiis ah ama loo isticmaalo. Laakiin dhibaatada gudbi baxdo sida aad u heli qabtay boqolaal biilasha yar bil kasta. Ha u malaynina bangiyada siin lahaa kuwaas. xal degdeg ah ayaan ka fikiray oo ku saabsan waa in ay "ka iibsan" qadaadiic tirsan Isbahysiga si ay u iibsadaan cheap
Lahjadaha of lagama maarmaan ah. Qadaadiic waa tiro badan sida fairgrounds. Sidee dukaanka iyo ganacsatada si aad u hesho lacagta qadaadiicda ah? Sida ay u shaqayso, Anigu garan maayo, laakiin waxa ay noqon doontaa mid xiiso leh si ay u baaraan dheeraad ah.
Waa ku filan tahay in ay iska qaataan labada madaahibta ugu weyn ee lacagta caddaanka ah, waa laga yaabaa in daallan si ay u ururiyaan lacag ah ee ku haray bangiyada maaraysay lacag caddaan ah oo u badan tahay sidoo kale in mishiinnada. Waayo, kuwa raba in ay sii caddaan ah yimaado ka dibna ay sameeyaan iska caabin ah sida ugu badan ee suuragalka ah in ay ka saarida heshaan hadda. Marka waxa la sameeyey ku dhowaad oo gebi ahaanba la eryay lacag caddaan ah.
Waa maxay farqiga u dhexeeya kaararka deynta iyo modernities kale ee taariikhda?
Farqiga u yahay in awoodaha dawladda, shirkadaha maaliyadeed iyo dukaamo si tartiib tartiib ah ku qasbay horumarka bulsho gebi listicmaalka aan fursadaha. Marna wuxuu ku saabsan yahay in mustaqbalka fog sida bulshada ay tahay in ay xaq u leedahay in doorasho u dhexeeya kaararka deynta (iyo agabka kale oo aan lacag caddaan ah) ama lacag caddaan ah. Doorashada ayaa weli ilaa xad weli waa sababtoo ah iska caabin ah oo horumarinta. Baabuurta ayaa si dhakhso ah, sleeker, ammaan, sahlan oo raqiis ah iyada oo loo marayo sano ah. Waqti ka, sababta oo ah dadka si toos ah u iibsaday baabuurta ka badan. Laakiin marka la eego kaararka deynta, waxaa inta badan ku saabsan qasab ah inaad abal aqbalo iyo qasab tartiib ah si aad u hesho dadka si ay u isticmaalaan.
Tusaale ka mid ah taariikhda dabiiciga ah iyo horumarinta farsamada waa Dadka lacagta ama aqoon korodhsiga ka fog xadka asalka guuro. Waxay u dhaxayn kartaa ka mid ah dadka Stone Age kii födosöket doondoonaan sababo ugaarsiga cusub in safarka bannaan. Iyada oo horumar dagaalka iyo hubka waa dabiici ah, inkastoo mid ka mid heer sare ah negative. Laakiin horumarinta kontantlösheten jiro dabiiciga ah. Waa labada aan dabiici ahayn
oo xun. Waa horumarinta qalloocan inta badan dhaqaajiyey dulun iyo xadgudub awoodeed. Baadi A aasaasiga ah ee dood listicmaalka waa kontantlöshet in lagu taswiiray sida horumarinta dabiici ah. Qof kasta oo u maleeyo in kontantlöshet waa horumar dabiici ah in barwaaqoobi doonaan yaabee boqolaal sano Daalimiinta. Nidaamyada halkii loo ekaysiin karaa in a xayawaanka qaadheen iyo atrophied sida biology ama ay u noolaadaan waa in mustaqbalka fog karo.
Waxaad dooran kartaa inaad ku socotaan, wareegga, baska ama tag baabuur by in ay ka shaqeeyaan. In kasta oo baabuur ayaa diyaar u ah guud ee qiyaas ahaan hal boqol oo sannadood, waxaa weli jira dad badan oo doonaya in ay noqon oo aan baabuur. Waxaa la mid ah telefoonka, telefishinka, raadiyaha, internet-ka, kombiyuutarada iyo wixii la mid ah. mid ka dibna ha ka fogaadaan isticmaalka nalalka iyo foornooyinkaaga dhexdooda korontada, maxaa yeelay, kuwanu waa lagama maarmaan iyo horumarinta dabiiciga ah. Laakiin xataa haddii ay taasi ku, waxaa weli suurtagal ah in la isticmaalo shumacyo iyo shooladaha la shito sida kale loogu talagalay kuwa raba. Waxa ay noqon lahayd aan macquul ahayn iyo kuwa sinaysta darana in uu ku qasbo darawalnimo oo dhan. Laakiin marka la eego kaararka deynta waa khalkhalgelinta Mucaradka. Wax muujinaysaa in kontantlöshet waa horumarinta farsamada caafimaad oo dabiici ah.
Vecka 10, tisdag 9 mars 2021 kl. 07:46